I-Ultrasonic Milling yeLipstick Production - Ubuchwepheshe be-Hielscher Ultrasound
Ukukhiqizwa kweLipstick kufaka ukugaya nokuxubha kwama-waxes kanye nemibala yemibala ezingeni eliqondakala kahle ukuze kuqinisekiswe iphrofayili ethile yokuthungwa kwemibala. Ukugaya nokuxubha kwe-Ultrasonic kuyindlela ethembekile, esebenza kahle, futhi efanelekile yokwenza umkhiqizo ukhiqiza izimbotshana ezinamazinyo aphezulu kakhulu we-wax / pigment.
Ukuxubana kwe-Ultrasonic Nokugaya i-Lipstick Production
Ngokuvamile, ukwenziwa kwezindebe zezindebe kwenziwa ngamaqoqo amancane ngosayizi omncane, ngoba ukwakheka kwezimpawu zomlomo ngamunye kuyahluka ngombala / umthunzi, isicwebezelisi, izithako (izinhlanganisela ezondlayo) njll.
Ukukhiqiza izindebe zeLipstick kufaka phakathi izithako ezahlukahlukene ezifana ne-waxes (i-beewax, i-candelilla wax, i-camauba), imibala (isib. I-organic ne -organic, i-pigment, i-carmine; imibala ethathwe kwesitshalo, imibala yamaminerali enjenge-micas, i-oxides, i-ultramarines), utshwala (i-solvent), uwoyela (amaminerali, i-castor, i-lanolin, noma i-oyela yemifino) kanye nezengezo (izithako zokugcina, ama-antioxidants, izithako ezikhathalelayo, iphunga). Ngokuvamile, isilinganiso samafutha: i-wax: i-pigment isondele. 50-70%: 20-30%: 5-15%, ngokulandelana.
Lezo zithako ziyancibilika futhi zivuselelwe emabhegini ahlukile: ibhendi eyodwa iqukethe izithambisi, ibhendi yesibili iqukethe ama-lipids / uwoyela, bese i-batch yesithathu iqukethe amafutha nezinye izinto ze-waxy.
Ukufaka imibala yemibala, isixazululo se-solvent namafutha afudumele afudumele (cishe. I-180 ° F noma i-85 ° C) kuxutshwa nemibala yombala ngokushukumisa ukuze kwakheke i-primex engaxutshiwe. I-primex ifakwa kwi-ultrasonic flow-ngokusebenzisa reactionor, lapho i-pigment slurry iphathwa khona nge-ultrasonic eqinile (acoustic) cavitation. I-Ultrasonic cavitation iyindlela yokwelapha eyenziwe ngomshini, esekelwe kumandla e-shear ngokweqile nokushayisana okuthile. I-Ultrasonic milling nokugaya ivumela ukulawulwa kwenqubo okuqondile bese kuthi lokho kukhishwe njalo kukhwalithi ephezulu.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kukhiqiza ukumiswa okufana nano-sano: ijika eliluhlaza – ngaphambi kwe-sonication / ijika elibomvu ngemuva kwe-sonication
I-UIP2000hdT i-ultrasonicator yemikhiqizo yezimonyo ku-storless yensimbi engenasici
Ukugaya nokugaya kwe-ultrasonic kunciphisa ubukhulu bezinhlayiyana zemibala ngendlela efanayo ukuze kutholwe ukuthungwa okubushelelezi. Lesi yisinyathelo esibalulekile ngoba ukuthungwa kwe-lipstick kuwuphawu lwekhwalithi ebalulekile futhi umuzwa wokugaya ungathandeki. Ngaphezu kwalokho, ukusatshalaliswa kosayizi bezinhlayiyana kubalulekile ukuthola amandla wokuphrinta nokufaka umbala ojulile we-lipstick.
Ngenkathi abahlanganisi be-shear abavamile, abagibeli be-roller mill kanye nama-mill bead befaka umoya kuma-oyili / e-pigment slurry, i-inline sonication igwema ukufakwa kwamabhamuza wegesi. I-Ultrasonication inemiphumela e-de-aerating / degassing, eyenza isinyathelo esilandelayo sokwengeza kabusha nge-vacuum engasho lutho. Ngokugwema isinyathelo sokweyisa, izindleko zokucubungula nesikhathi kuncishisiwe.
Esikhathini sokuxuba sesibili, i-pigment / i-oyili yokugcoba ihlanganiswa ne-wax eshisayo. Ukuxuba kwe-pigment / i-oyili ne-wax eshisayo kungenziwa ngumxubanisi we-ultrasonic, futhi. Ekugcineni, inhlanganisela ye-lipstick ithululelwa kumashubhu wokubumba, lapho i-lipstick ipholile futhi iqina khona ngenkathi ithola ifomu layo elijwayelekile lenduku. Lapho nje ingxube ye-wax / pigment isiqine, ingafakwa kufakwe epulasitiki noma insimbi futhi ilungele ukuthengiswa.
I-UIP4000hdT, iprosesa elinamandla le-4000 watts
Izinzuzo Zokugaya Nokuhlunga kwe-Ultrasonic
imiphumela yokuxuba umfaniswano
aphatha izinhlayiya abrasive
ukucubungula okusheshayo nangokufanele
kulula ukuhlanza / ukuguqula okusheshayo phakathi kwemibala
Izingxube Eziphezulu Zokwenza Ultrasonic zeLipstick Production
I-Hielscher Ultrasonics inikela ngama-ultrasonicators asebenza kahle kakhulu kubakhiqizi bezimonyo emhlabeni jikelele. I-Ultrasonic milling, ukugaya nokuhlakazeka kuyindlela yobuchwepheshe ethembekile futhi ephumelelayo yokukhiqiza ukuxubana okungahambi kahle okubandakanya i-waxes, lipids, i-O / W noma i-W / O emulsions, imibala yezithasiselo kanye nezithasiselo ezinempilo. Abahlanganisi be-Ultrasonic baphatha kalula ama-slurries we-viscous afana nokuncibilika kwe-wax, imithwalo yezinhlayiya eziphakeme, kanye ne-pastes. Ngisho nokusingathwa kwezinhlayiya eziluhlaza kakhulu akunankinga yokuhlanganiswa kwe-ultrasonic kanye ne-milling system.
Izinqubo ze-Ultrasonic zingaqhutshwa nge-batch nangokusebenza okuqhubekayo kwe-inline. Ikakhulu ukuthola inkatho enkulu, ukucubungula kwe-inthanethi kwe-ultrasonic kusetshenziswa i-ultrasonic flow-ngokusebenzisa reactionor kunikeza izinzuzo ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukufana komkhiqizo, ngoba isikhathi sokugcinwa endaweni ye-sonication kanye nokushisa kokucubungula kungalawulwa ngokuqondile. Kusetshenziswa uhlelo olusezingeni eliphakathi nendawo olune-flow cell kuvimbela ukufakwa kwamabhamuza omoya futhi kunikeza nemiphumela yoku-deerer / yeassassing.
I-Hielscher Ultrasonics inolwazi lwesikhathi eside kumklamo, ukukhiqizwa nokusatshalaliswa kwe-ultrasonicators ephezulu yokusebenza ukukhiqizwa kwemikhiqizo yezimonyo. Sisiza amakhasimende ethu kusuka ekuhlolweni kokuqala kokusebenza futhi wenza inqubo yokufaka ukufakwa kanye nokusebenza kophiko lokusabalalisa lwe-ultrasonical-size.
Izindebe zeLipstick, i-Lip Gloss, i-Lip Balms
Izindebe zomlomo kungenye yemikhiqizo yezimonyo ethandwa kakhulu futhi esetshenziswa kakhulu. Eminye imikhiqizo yezindebe zokucwilisa izindebe zezindebe, ama-balms nezindebe.
Ngokuvamile, izindebe zemilomo zibonisa amandla okuhlala isikhathi eside futhi ukumboza ngaphezu kwama-lip glosses noma ama-balms we-lip.
Ububanzi bemibala nokuqedwa kwezindebe zezindebe cishe akunamkhawulo: Izindebe zomlomo zitholakala kunoma imiphi imibala, ama-nuances, kanye nokuqedwa – kusuka phezulu-gloss kuya ku-shimmery / shining / glittering kuya ku-satin kuya ku-matte. Lokhu kuphenduka izindebe zomlomo zibe umkhiqizo oguquguqukayo futhi kunikeze umsebenzisi izinketho eziningi zokwenza ukubukeka komuntu ngamunye.
Ngenkathi ukubukeka nokubukeka kuyimiphumela eyinhloko futhi ebonakalayo ebonakalayo eyenziwe izindebe zezindebe, zivame ukuza nezici ezingeziwe ezinjengezengezo ezondlayo, izithako zokuqinisa izindebe, i-sunscreen nezinye izengezo. Ukuze uthole izimfanelo nezakhiwo ezithile ze-lipstick, ukwakheka kwe-lipstick kuyehluka futhi kungaba yinkimbinkimbi impela. Izinto eziyisisekelo zokusetshenziswa kwezindebe zezindebe zingama-pigment, uwoyela, ama-wax, nama-emollients, anikela ngombala, umswakama nokuvikelwa.
Isisekelo se-waxes, i-polymers, (sub-) izinhlayiya ze-micron, kanye nemicu isetshenziselwa ukunika i-lipstick indlela nesimo sayo. Ngakho-ke, i-wax ye-crystalline ne-amorphous enikezela ngosayizi omncane wekristalu lapho selehlile futhi iqine, kufanele ihlanganiswe ukuze i-lipstick yokugcina inikeze ukuqina okuhle, ukubopha kwe-oyili / i-pigment namandla. Inhlanganisela esetshenziswa kakhulu yi-eg, ozokerite + microcrystalline; i-polyethylene + microcrystalline; polyethylene + ozokerite; noma i-beewax + i-candellila + i-carnauba.
Uhlobo nenani lama-emollients ekwakhiweni kwe-lipstick yizinto ezibalulekile ezithonya kakhulu ukusebenza kwezimpawu ze-lipstick, amandla wombala, ukusabalala, ukuqina, nokuqedela. Ama-emollients asetshenziswa kakhulu ama-arecastor uwoyela, i-lanolin, ibhotela le-shea, ibhotela le-cocoa, i-lanolin yokwenziwa (bis-diglyceryl polyacyladipate-2), i-polybutene, i-hydrogenated polyisobutene, ne-triisostearyl citrate.
Indlela ejwayelekile yokwakha izindebe ibukeka njengokulandelayo:
I-wax / i-polymers: 15-28% (njengokuhlanganiswa kwezinto zokusetshenziswa ezi-2-5)
Izikhumba ezi-pearl luster: 0-10%
Ama-ejenti wokulinganisa: 0-5%
Izithako zokugqoka: 0-5%
Ama-Preservatives / Antioxidants: 0.2-0.5%